တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင်
차량으로 이동하는 문 대통령 (방콕=연합뉴스) 한상균 기자 = 문재인 대통령과 김정숙 여사가 1일 오후(현지시간) 태국 돈무앙 공항에서 차량으로 이동하고 있다. 문 대통령은 5박 6일의 일정으로 태국·미얀마·라오스 등 동남아 3개국을 순방한다. 2019.9.1 xyz@yna.co.kr/2019-09-01 19:33:08/
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ သုံးနိုင်ငံခရီးစဉ် စတင်
တောင်ကိုရီးယား သမ္မတ မွန်ဂျေအင်းရဲ့ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ လာအို သုံးနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ကို မနေ့ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။
ဒီနှစ်ကုန်မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ တောင်ကိုးရီးယားနဲ့ အာဆီယံတို့ရဲ့ ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင် အခုခရီးစဉ် စတင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား သမ္မတအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်တာ ခုနစ်နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှ သုံးနိုင်ငံဟာ သမ္မတ မွန်ဂျေအင်းအတွက် “တောင်ပိုင်း မူဝါဒသစ်” ဖြစ်တယ်လို့ သမ္မတရုံး ပြောခွင့်ရသူ ကိုမင်ဂျွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ တောင်ကိုရီးယား ဘဏ္ဍာရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း လိုက်ပါလာပြီး အခွင့်အလမ်းတွေကို လေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောငျကိုရီးယား သမ်မတ သုံးနိုငျငံခရီးစဉျ စတငျ
တောငျကိုရီးယား သမ်မတ မှနျဂအြေငျးရဲ့ ထိုငျး၊ မွနျမာ၊ လာအို သုံးနိုငျငံ ခရီးစဉျကို မနေ့ စကျတငျဘာ ၁ ရကျနမှေ့ာ စတငျခဲ့ပွီး ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ကို ရောကျရှိလာပါတယျ။
ဒီနှဈကုနျမှာ ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားတဲ့ တောငျကိုးရီးယားနဲ့ အာဆီယံတို့ရဲ့ ထိပျသီး ဆှေးနှေးပှဲ မတိုငျခငျ အခုခရီးစဉျ စတငျလိုကျတာ ဖွဈပါတယျ။ တောငျကိုရီးယား သမ်မတအဖွဈ ထိုငျးနိုငျငံကို လာရောကျလညျပတျတာ ခုနဈနှဈအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ဖွဈပါတယျ။
အရှတေ့ောငျအာရှ သုံးနိုငျငံဟာ သမ်မတ မှနျဂအြေငျးအတှကျ “တောငျပိုငျး မူဝါဒသဈ” ဖွဈတယျလို့ သမ်မတရုံး ပွောခှငျ့ရသူ ကိုမငျဂြှနျးက ပွောခဲ့ပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ ခရီးစဉျမှာ တောငျကိုရီးယား ဘဏ်ဍာရေး လုပျငနျးရှငျတှလေညျး လိုကျပါလာပွီး အခှငျ့အလမျးတှကေို လလေ့ာမှာ ဖွဈပါတယျ။
Previous articleဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး ကူညီပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ထိုင်းကို တိုက်တွန်း
Next articleဟိုက်ဒရာဘတ်ပြည်နယ်မှာ ဘင်္ဂါလီ ၅၀၀၀ ရှိတယ်လို့ အိန္ဒိယ အာဏာပိုင်တွေ ပြော